हुलिया र फोटोको आधारमा पहिचान भएमा आफन्तलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीको आग्रह ! – Sodhpatra
हुलिया र फोटोको आधारमा पहिचान भएमा आफन्तलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीको आग्रह !
धनगढीमा बेवारिसे भेटिएका व्यक्तिको मृत्यु
प्रकाशित : २३ श्रावण २०७८, शनिबार १६:१४ August 7, 2021
धनगढी: धनगढीमा बेवारिसे भेटिएका व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । बजार क्षेत्रमा बेवारिसे भेटिएका ३०-३५ वर्षीय पुरुषको उपचार का क्रममा मृत्यु भएको हो ।
‘बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका ती पुरुषको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले भने, ‘उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। पहिचान खुल्न सकेको छैन।’
उनका अनुसार शुक्रवार साँझ सेती अस्पतालमा उपचारका लागि इमरजेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएकोमा राति मृत्यु भएको हो । ‘वर्ण कल्साउलो, उचाइ अन्दाजी ५ फिट ६ इन्च, माथिल्लो शरीरमा निलो खरानी रङ्गको गन्जी र तल्लो शरीरमा कालो रङ्गको हाप पाइन्ट लगाएका व्यक्तिको मृत्यु भएको उनले बताए ।
लास सेती प्रादेशिक अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ । मृतकको हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेको र आफन्त पनि सम्पर्कमा नआएको हुँदा हुलिया र फोटो आधारमा पहिचान भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।